उत्पत्ति २४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
इसहाकको लागि पत्नी खोजिन्छ (१-५८)
रिबेका इसहाकलाई भेट्‌न जान्छिन्‌ (५९-६७)
२४ अब्राहामको उमेर निकै ढल्किसकेको थियो; तिनी बूढा भइसकेका थिए। यहोवा परमेश्‍वरले तिनलाई सबै कुरामा आशिष्‌ दिनुभएको थियो।+ २ तब अब्राहामले आफ्नो घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाउने भरपर्दो अनि सबैभन्दा पुरानो नोकरलाई बोलाएर भने:+ “कृपया तिम्रो हात मेरो तिघ्रामुनि राख।* ३ अनि स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्‍वर यहोवाको कसम खाएर भन, ‘तिमीले मेरो छोराको लागि यस ठाउँको कनानी केटी खोज्नेछैनौ।+ ४ तिमी मेरो देशमा मेरा नातेदारकहाँ+ गएर मेरो छोरा इसहाकको निम्ति केटी खोज्नेछौ।’” ५ तर ती नोकरले अब्राहामलाई भने: “ती केटी मसँग यहाँ आउन मानिनन्‌ भने के गरूँ? तपाईँको छोरालाई मसँगै तपाईँको देशमा लैजाऊँ कि?”+ ६ तब अब्राहामले भने: “अहँ! तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ नलैजानू!+ ७ किनकि मलाई मेरो बुबाको घर अनि मेरा नातेदार छोड्‌न लगाएर यहाँ विदेशी भूमिमा ल्याउनुहुने+ अनि स्वर्गबाट मसित बोल्नुहुने परमेश्‍वर यहोवाले यसो भनेर मसित शपथ खानुभएको थियो:+ ‘म यो देश+ तिम्रै सन्तानलाई दिनेछु।’+ त्यसैले उहाँले नै तिम्रो अघि-अघि स्वर्गदूत पठाउनुहुनेछ+ र तिमीले त्यहीँबाटै मेरो छोराको लागि केटी खोजेर ल्याउनेछौ।+ ८ यदि ती केटी तिमीसँग आउन मानिनन्‌ भने तिमी यस शपथबाट मुक्‍त हुनेछौ। तर मेरो छोरालाई चाहिँ त्यहाँ लाँदै नलानू।” ९ त्यसपछि ती नोकरले आफ्ना मालिक अब्राहामको तिघ्रामुनि हात राखे र शपथ खाए।+ १० त्यसपछि ती नोकरले आफ्ना मालिकको बथानबाट १० वटा उँट र उपहार दिनको लागि किसिम-किसिमका राम्रा सामान लिए। अनि तिनी मेसोपोटामिया गए र नाहोर सहरतिर लागे। ११ सहरबाहिर इनारनजिकै पुगेपछि तिनले आफ्ना उँटहरूलाई बसाए। त्यतिबेला साँझ पर्न लागेकोले सहरका स्त्रीहरू पानी भर्न इनारमा आउने बेला भएको थियो। १२ त्यसपछि तिनले परमेश्‍वरलाई यस्तो बिन्ती गरे: “हे यहोवा, मेरा मालिक अब्राहामका परमेश्‍वर! म जे कामको लागि आएको छु, मलाई त्यसमा सफल बनाउनुहोस्‌ र मेरा मालिक अब्राहाममाथि कृपा* देखाउनुहोस्‌। १३ हेर्नुहोस्‌, म इनारनजिकै बसिरहेको छु। अनि यस सहरका छोरीहरू पानी भर्न आउँदै छन्‌। १४ त्यसैले यस्तो होस्‌, म जुन केटीलाई ‘म पानी पिउन चाहन्छु, तिम्रो गाग्रो मतिर ढल्काइदेऊ’ भनूँला र जसले मलाई ‘पिउनुहोस्‌, म तपाईँका उँटहरूलाई पनि पानी खुवाइदिन्छु’ भन्लिन्‌, त्यही नै तपाईँले आफ्नो दास इसहाकको लागि रोज्नुभएको केटी होस्‌। तपाईँले मेरा मालिकलाई कृपा* देखाउनुभएको रहेछ भनेर यसैबाट मैले थाह पाउन सकूँ।” १५ तिनले प्रार्थना गरिसिध्याउन नपाउँदै रिबेका काँधमा गाग्रो बोकेर आइन्‌। उनी अब्राहामको भाइ नाहोर+ र तिनकी पत्नी मिल्काहको+ छोरा बतुएलकी छोरी थिइन्‌।+ १६ रिबेका असाध्यै राम्री थिइन्‌। उनी कुनै पुरुषसँग सम्बन्ध नराखेकी कुमारी थिइन्‌। उनी इनारमा गइन्‌ र गाग्रो भरेर आइन्‌। १७ त्यतिखेरै अब्राहामको नोकर उनलाई भेट्‌न दौडेर गए र भने: “नानी, तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकता पानी पिउन दिन्छ्यौ कि?” १८ रिबेकाले भनिन्‌: “हुन्छ हजुर।” अनि उनले काँधमा बोकिरहेको गाग्रो तुरुन्तै तल झारिन्‌ र पानी पिउन दिइन्‌। १९ तिनलाई पानी दिइसकेपछि रिबेकाले भनिन्‌: “म तपाईँका उँटहरूलाई पनि इनारबाट पानी ल्याएर नअघाउन्जेल दिन्छु।” २० त्यसपछि रिबेकाले आफ्नो गाग्रोको पानी तुरुन्तै डुँडमा खन्याइन्‌। सबै उँटले पानी नखाउन्जेल उनी घरीघरी तल इनारतिर दौडेर पानी ओसार्दै गरिन्‌। २१ रिबेकाले पानी देउन्जेल अब्राहामको नोकरचाहिँ दङ्‌ग परेर रिबेकालाई हेरिरहे। अनि कतै यहोवाले तिनको यात्रा सफल बनाउनुभएको त होइन भनेर सोच्न थाले। २२ उँटहरूले पानी खाइसकेपछि अब्राहामको नोकरले रिबेकालाई लगभग आधा शेकेल* सुनको नत्थ र लगभग १० शेकेल सुनका दुइटा बाला दिए। २३ त्यसपछि तिनले भने: “नानी, तिमी कसकी छोरी हौ? तिम्रो बुबाको घरमा बास पाइन्छ?” २४ रिबेकाले भनिन्‌: “म बतुएलकी छोरी हुँ+ अनि मेरो हजुरबुबा र हजुरआमाको नाम नाहोर र मिल्काह हो।”+ २५ तिनले अझै भनिन्‌: “हामीकहाँ प्रशस्त दाना र पराल छ। अनि बास बस्न ठाउँ पनि छ।” २६ त्यसपछि अब्राहामको नोकरले घोप्टेर यहोवा परमेश्‍वरलाई दण्डवत्‌ गरे। २७ अनि तिनले यसो भने: “मेरा मालिक अब्राहामका परमेश्‍वर यहोवाको जय होस्‌! किनभने उहाँले मेरा मालिकलाई कृपा* देखाउन छोड्‌नुभएको छैन र मेरा मालिकलाई सधैँ साथ दिनुभएको छ। यहोवा परमेश्‍वरले मलाई डोऱ्‍याएर मेरा मालिकका दाजुभाइकहाँ पुऱ्‍याउनुभएको छ।” २८ तब रिबेका हतारिँदै घरतिर गइन्‌ अनि आफ्नी आमा र घरका सबैलाई खबर गरिन्‌। २९ रिबेकाको लाबान+ नाम गरेका एक जना दाइ थिए। लाबान इनारनजिकै बसिरहेका ती मानिसलाई भेट्‌न हिँडिहाले। ३० लाबानले आफ्नी बहिनीले लगाइराखेको नत्थ र बाला देखे अनि बहिनीले “ती मानिसले मलाई यसो भने” भन्दै गरेको पनि सुने। त्यसैले तिनी तुरुन्तै ती मानिसलाई भेट्‌न गए। ती मानिस अझै पनि आफ्ना उँटहरूसँगै इनारनजिकै उभिरहेका थिए। ३१ तिनलाई भेट्‌नेबित्तिकै लाबानले भने: “हे यहोवाका निगाह-पात्र, आउनुहोस्‌! मेरो घर जाऔँ। मैले तपाईँको लागि र उँटहरूको लागि ठाउँ तयार पारिसकेँ।” ३२ ती मानिस लाबानको घरमा गए; तिनले* उँटहरूको भारी उतारे अनि उँटहरूलाई पराल र दाना दिए। लाबानले तिनलाई र तिनीसँग आएका अरू मानिसलाई गोडा धुन पानी पनि दिए। ३३ त्यसपछि तिनलाई भोजन टक्य्राए। तर तिनले भने: “पहिले म केही भन्‍न चाहन्छु, त्यसपछि खाऊँला।” तब लाबानले भने: “हुन्छ, भन्‍नुहोस्‌!” ३४ तिनले भने: “म अब्राहामको नोकर हुँ।+ ३५ यहोवा परमेश्‍वरले मेरा मालिकलाई प्रशस्तै आशिष्‌ दिनुभएको छ। उहाँले मेरा मालिकलाई थुप्रै भेडा, गाईवस्तु, सुनचाँदी, नोकरचाकर अनि उँट र गधाहरू दिएर एकदमै धनी बनाउनुभएको छ।+ ३६ मेरा मालिककी पत्नी साराले बुढेसकालमा मेरा मालिकको लागि एउटा छोरा जन्माउनुभयो।+ यही छोरालाई मेरा मालिकले आफ्नो सबै सम्पत्ति दिनुहुनेछ।+ ३७ त्यसैले मेरा मालिकले मलाई यस्तो शपथ खान लगाउनुभयो: ‘तिमीले मेरो छोराको लागि म बसिरहेको यस ठाउँको कनानी केटी नखोज्नू।+ ३८ तर मेरो बुबाको घरमा, मेरा नातेदारकहाँ+ गएर मेरो छोरा इसहाकको लागि एउटी केटी ल्याउनू।’+ ३९ अनि मैले मेरा मालिकलाई भनेँ: ‘तर ती केटी मसँगै यस ठाउँमा आउन मानिनन्‌ भने नि?’+ ४० त्यसपछि उहाँले मलाई भन्‍नुभयो: ‘मैले उपासना गर्ने+ गरेको यहोवा परमेश्‍वरले नै तिम्रो अघि-अघि स्वर्गदूत पठाउनुहुनेछ+ र निश्‍चय नै तिम्रो यात्रा सफल बनाउनुहुनेछ। अनि तिमीले मेरै नातेदारबाट र मेरै बुबाको घरानाबाट मेरो छोराको लागि केटी ल्याउनू।+ ४१ तिमी मेरा नातेदारहरूकहाँ गयौ तर तिनीहरूले केटी दिन मानेनन्‌ भने म तिमीलाई यस शपथबाट मुक्‍त गर्नेछु। तब तिमी यस शपथबाट मुक्‍त हुनेछौ।’+ ४२ “आज इनारनजिकै पुग्दा मैले यसो भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ: ‘हे मेरा मालिकका परमेश्‍वर यहोवा, तपाईँले मेरो यात्रा सफल बनाइदिनुहुन्छ भने यस्तो होस्‌: ४३ म यहाँ इनारनजिकै उभिरहेको छु र पानी भर्न आएकी कुनै एउटी केटीलाई+ “कृपया तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ” भन्दा ४४ उनले “पिउनुहोस्‌ र म तपाईँका उँटहरूलाई पनि इनारबाट पानी ल्याएर खुवाइदिन्छु” भनिन्‌ भने उनी नै यहोवा परमेश्‍वरले मेरा मालिकका छोराको लागि छान्‍नुभएको केटी होऊन्‌।’+ ४५ “मैले मनमनै प्रार्थना गरिसिध्याएकै थिइनँ, रिबेका काँधमा गाग्रो बोकेर आइन्‌ र तल इनारमा गएर पानी भर्न थालिन्‌। त्यसपछि मैले उनलाई भनेँ: ‘मलाई पानी पिउन देऊ।’+ ४६ उनले काँधमा बोकिरहेको गाग्रो तुरुन्तै झारेर भनिन्‌: ‘पिउनुहोस्‌+ र म तपाईँका उँटहरूलाई पनि पानी खुवाइदिन्छु।’ त्यसपछि मैले पानी पिएँ र उनले उँटहरूलाई पनि पानी दिइन्‌। ४७ अनि मैले उनलाई सोधेँ: ‘नानी, तिमी कसकी छोरी हौ?’ उनले यस्तो जवाफ दिइन्‌: ‘म बतुएलकी छोरी, नाहोर र मिल्काहकी नातिनी हुँ।’ त्यसपछि मैले उनको नाकमा नत्थ र हातमा बाला लगाइदिएँ।+ ४८ मैले घोप्टो परेर यहोवा परमेश्‍वरलाई दण्डवत्‌ गरेँ र मेरा मालिक अब्राहामका परमेश्‍वर यहोवालाई धन्यवाद चढाएँ।+ मेरा मालिकका छोराको लागि तपाईँहरूकी चेली लैजान उहाँले नै मलाई यसरी सही ठाउँमा डोऱ्‍याउनुभयो र मेरा मालिकका दाजुभाइकहाँ पुऱ्‍याउनुभयो। ४९ त्यसैले यदि तपाईँ आफ्नी चेली दिएर मेरा मालिक अब्राहामलाई कृपा* र वफादारी देखाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया भन्‍नुहोस्‌। चाहनुहुन्‍न भने पनि भन्‍नुहोस्‌, त्यसपछि म आफ्नो बाटो लागूँला।”*+ ५० तब लाबान र बतुएलले यस्तो जवाफ दिए: “यो सब हुनुमा यहोवा परमेश्‍वरकै हात छ। त्यसैले हामी तपाईँलाई हुन्छ वा हुँदैन केही भन्‍न सक्दैनौँ। ५१ हेर्नुहोस्‌, रिबेका यहाँ तपाईँकै अगाडि छिन्‌, लिएर जानुहोस्‌। यहोवा परमेश्‍वरले भन्‍नुभएझैँ तपाईँका मालिकका छोराले उनीसित बिहे गरून्‌।” ५२ तिनीहरूको कुरा सुन्‍नेबित्तिकै अब्राहामका नोकरले भुईँमा घोप्टेर यहोवा परमेश्‍वरलाई दण्डवत्‌ गरे। ५३ त्यसपछि आफूले ल्याएको सुनचाँदीका गरगहना अनि लुगाहरू रिबेकालाई दिए। उनका दाइ र आमालाई पनि महँगा-महँगा उपहारहरू दिए। ५४ त्यसपछि ती नोकर र तिनीसँगै आएका मानिसहरूले खानपिन गरे अनि त्यहीँ बास बसे। बिहान उठेपछि तिनले भने: “अब मलाई बिदा दिनुहोस्‌, म मेरा मालिककहाँ फर्कन्छु।” ५५ तर रिबेकाका दाइ र आमाले भने: “उसलाई १० दिनजति हामीसँगै बस्न दिनुहोस्‌। त्यसपछि उसलाई लैजानुहोला।” ५६ तर तिनले भने: “यहोवा परमेश्‍वरले मेरो यात्रा सफल बनाउनुभएको छ। त्यसकारण मलाई नरोक्नुहोस्‌। मलाई बिदा दिनुहोस्‌, म सकेजति छिटो मेरा मालिककहाँ फर्कन चाहन्छु।” ५७ यो कुरा सुनेपछि तिनीहरूले भने: “त्यसोभए रिबेकालाई बोलाएर उसैलाई सोधौँ न।” ५८ तिनीहरूले रिबेकालाई बोलाएर सोधे: “तिमी उहाँसँग जान्छ्यौ त?” अनि उनले यस्तो जवाफ दिइन्‌: “अँ, म जान्छु।” ५९ अनि तिनीहरूले रिबेका+ अनि उनकी धाईआमा*+ र अब्राहामका नोकर अनि तिनका मानिसहरूलाई बिदा गरे। ६० तिनीहरूले रिबेकालाई आशिष्‌ दिँदै यसो भने: “हे हाम्री बहिनी, तिम्रा सन्तान लाखौँ-लाख होऊन्‌* र तिनीहरूले शत्रुहरूका सहर कब्जा गरून्‌।”+ ६१ त्यसपछि रिबेका र उनका सुसारेहरू उँटमा चढे अनि ती मानिसको पछि लागे। यसरी ती नोकर रिबेकालाई लिएर घर फर्के। ६२ नेगेबमा+ बसोबास गर्ने इसहाक त्यतिखेर बेर-लहै-रोइबाट+ फर्कँदै थिए। ६३ तिनी मनन गर्दै+ साँझतिर खेतमा टहलिरहेका थिए। अनि आँखा उठाएर हेर्दा तिनले उँटको लस्कर आइरहेको देखे। ६४ रिबेकाले पनि आँखा उठाएर हेर्दा इसहाकलाई देखिन्‌ र तुरुन्तै उँटबाट ओर्लिन्‌। ६५ त्यसपछि उनले अब्राहामका नोकरलाई सोधिन्‌: “हामीलाई भेट्‌न खेतबाट आउँदै गरेका मानिस को हुन्‌?” अनि ती नोकरले जवाफ दिए: “उहाँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ।” अनि रिबेकाले घुम्टो हालिन्‌। ६६ ती नोकरले इसहाकलाई सबै कुराको बेलीबिस्तार लगाए। ६७ इसहाकले रिबेकालाई आफ्नी आमा साराको पालमा लगे।+ तिनले रिबेकालाई आफ्नी पत्नी बनाए र तिनको उनीसित माया बस्यो।+ आफ्नी आमाको मृत्युको कारण दुःखी भएका इसहाकले बल्ल सान्त्वना पाए।+
^ त्यतिबेलाको चलनअनुसार शपथ खाने तरिका।
^ यो व्यक्‍ति लाबान हुन सक्छ।
^ शा., “दायाँतिर वा बायाँतिर लागूँला।”
^ यसले ती धाईआमालाई जनाउँछ, जो उनकी सुसारे भएकी थिइन्‌।
^ वा “तिमी लाखौँ लाखकी आमा होऊ।”